Hallim Park, Hallim Park - Nosy Jeju
Asia Korea Atsimo Nosy Jeju
Adiresy: 300, Hallim-ro, Hallim-eub, Cheju, Jeju-do, Korea Atsimo
Tel: +82 64-796-0001
Fotoana misokatra: 08: 30-19: 00
Taonan'ny fototra: 1971
Any amin'ny nosy Koreana Atsimo any Jeju dia misy ny volkano volombava amin'i Hallasan . Any amin'ny ilany andrefana dia Hallim Park (Hallim Park), izay any amin'ny faritanin'i Jeju . Io no iray amin'ireo mpitsoa- ponenana lehibe indrindra ao amin'ny faritany, izay fitsidihan'ireo mpizaha tany mahafinaritra.
Io tahirin-tany voajanahary io dia natsangana tamin'ny faritany tsy manana aina tamin'ny taona 1971, avy amin'ny solontenan'i Son Bom Gyu. Nanao asa goavana ireo mpiasa tamin'ny fanararaotam-bolana tany amin'ny faritra tsy niteraka. Taorian'izany, dia nanamboatra zavamaniry mitoka-monina izy ireo. Ny fisokafana ofisialy dia tamin'ny 1986.
Ny faritra ao amin'ny Park Hallim ao Jeju dia 100 metatra toradroa. m. Ny faritaniny, afa-tsy ny volkano, dia mandray ampahany amin'ny morontsiraka miaraka amin'ny moron-dranomasina tsara tarehy.
Inona no ao amin'ny tahiry natiora?
Park Hallim dia mizara ho sekta 16, izay ahitan'ny mpizaha tany:
Zava-botanika. Maniry mihoatra ny 2000 karazana voninkazo, hazo sy kirihitra samihafa.
Zaridaina hazo hazo. Manana andraikitra lehibe eo amin'ny toerany sy ny fiainan'ny mpitsidika izy. Ireo zavamaniry ireo dia maneho fahasalamana ara-tsaina sy ara-batana.
Ireo lava lava Ssanönkul sy Höpzhekul. Ny gripa dia avy amin'ny volkano ary mifamatotra amin'ny andalana ambanin'ny tany. Eto dia misy fomban-java-maniry mampahatsiahy ny vorona, ny biby, ny olombelona ary ny dragona. Izy ireo dia manana lalana fizahan-tany sy herinaratra.
Ny tanàna ambanivohitr'i Cheam. Ity ny fiainan'ireo aborigènes 30 taona lasa izay (talohan'ny famerenana ara-toekarena). Ny trano dia manana tafon-driaka sy tanim-bosoka.
Zone de succulents. Ny Cacti dia nentina avy any Amerika Atsimo sy Afovoany.
Zaridaina rano. Izy io dia rafitra misy vatana mifamatonona. Misy farihy samihafa maniry eny amin'ny farihy, ary misy renirano ao afovoan-tanàna.
Ny Palmar. Ankoatra ny hazo palmie isan-karazany, ny yuccas, ny agaves ary ny hazo citrus dia mitombo eto. Ny fofony dia henon'ny metatra maromaro.
Zaridaina vato. Ny mpizaha tany dia hahita vato maro samihafa, entina manerana izao tontolo izao.
Tranombakoka ketsa sy mineraly. Ao amin'ny toeram-piofanana, ireo mpizahatany dia hiseho amin'ny fomba hanangonana sy handravahana vato sarobidy.
Kiwi zaridaina. Eo amin'ity làlana ity dia ahitanao ny fomba fambolena sy famokarana ity zavamaniry ity.
Fialamboly amidy. Ny faritry ny kianja dia misy kilalao sy toeram-pitsangatsanganana an-tsekoly, ary namboarina tamin'ny sarina mavo mena avy any Japon.
Zaridaina miaraka amin'ny vorona. Ao anatin'ity faritra ity no misy ny vorona isan-karazany ao Hallim.
Famokarana ala sy zavamaniry. Ny fampiratiana dia aseho amin'ny endrik'ilay havoana vato misy lakandrano sy riandrano kely. Ity misy sary nalaina avy amin'ilay mpitahiry malaza ao amin'ny nosy antsoina hoe Tolgaruban.
Zaran'ny pyracantha. Tena tsara tarehy izy ity ny volana Novambra, rehefa miasa ny mpiasan'ny valan-javamaniry ary mamoaka ny voankazo rehetra avy amin'ny voankazo.
The greenhouse. Izy io dia natokana ho an'ireo kolontsaina tropika izay nentina avy tany Azia atsimo atsinanana sy Indonezia .
Ny lakan'ny krysanthema dia famerenan-java-maniry mamiratra miaraka amin'ny sora-tanana voalohany.
Park Hallim ao Jeju dia misokatra isanandro amin'ny 08:30 maraina hatramin'ny 19:00 hariva. Ny biraon'ny tapakila dia mifarana amin'ny 18:00. Ny vidin'ny tapakila ho an'ny mpitsidika 18 taona dia $ 8, ary ho an'ny ankizy 4 ka hatramin'ny 17 taona - $ 5.5, ny ankizy latsaky ny 3 taona dia afaka.
Misy toeram-pisakafoanana 2 ao amin'ny toeram-piarovana. Ny sakafo nentim-paharazana Koreana dia natokana ho an'ireo trano, raha ny an'ny Eoropeana kosa dia mahandro sakafo tsy misy sakafom-biby. Misy ihany koa fivarotana fanomezana.
Afaka miditra ao amin'ny Park Hallim ianao amin'ny alàlan'ny fitsangatsanganana avy ao an-tanànan'i Jeju na amin'ny bus nos. 102, 181 sy 202-1. Ny fifamoivoizana dia mivoaka avy ao afovoan-tanàna ary mijanona eo akaikin'ny fidirana maintin'ny tahiry. Ny lalana dia mandeha adiny iray.
Hazo voninkazo - toetra mahasoa
Ny sakafo hariva
Ankizy IVF - vokatry ny hoavy
Inona no mitranga amin'ny vatanao rehefa miala sigara ianao?
Inona no mahatonga ny loko mena?
Granola - tsara sy ratsy
Krôlojatra amin'ny fomba fanolorana an'i Provence
Zaridaina Tradescantia - fambolena sy fiahiana
Fambolena karazan-katsaka any am-piandohan'ny lohataona - ahoana no hisorohana ny fahadisoana iombonana?
Tazo mahery amin'ny zaza tsy misy soritr'aretina
Ahoana ny fantsehana ny hozatry ny vaginal?
Fotsy hoditra - ny hevitra tsara indrindra sy ny endriny voalohany
Salady mangatsiaka amin'ny ala
Kitapo hazo ho an'ny lakozia
Fifandirana eo amin'ny tarehy
Halloween - hevitra momba ny fialantsasatra